Xuska sanad guuradda saddexaad ee dilkii Suldaan Hurre
Buluugleey August 16, 2005
Bisha Agoosto 17keeda 2003 ayey aheyd markii dilkii naxariis darrada aheyd ee Suldaan Axmed Maxamed Hurre loo geestay. Suldaan Axmed Hure ayaa dilkiisa la aaminsanyahay inuu ka danbeeyay Col. Cabdullahi Yusuf, oo xilligaasi madax ka ahaa dowlad gobaleedka loo yaqaan Puntland. Suldaan Axmed waxaa lagu toogtay tuulada Kala-bayr ee ku taal gobolka waqooyi Bari.
Suladaan Axmed Hure wuxuu ahaa geesi aqoon sare leh, isla markaasna ahaa nin aad looga yaqaan dalka Soomaaliya. Suldaan Hure waxuu soo ifbaxday markii ay siyaasada dowlad gobaleedka Puntland cakiranytay oo uu Col. Cabdulaahi Yusuf ku adkeystay inuu xukunka marnaba ka degeynin. Mudadaas ayaa Suldaan Axmed Hure dowr weyn ka ciyaarey siyaasada gobolka waqooyi bari, wuxuuna si geesinimo leh u hor istaagay diktatooriyadii ama xukun kororsigii Col. Cabdullahi Yusuf oo markaasi ku doonayey inuu awooda maamul gobaleedka Puntland ku sii hayo.
Suldaan Hurre wuxuu ahaa nin mabda' adag, hadal cad ee aan marnaba seegein abaarta hadalka uu leeyahay, wuxuuna si toos ah uu gaashaanka ugu dhiftay siyaasada qallafsan ee Col. Cabdullahi Yusuf oo mudadaasi ku hoggaaminayey shacabka reer Puntland. Suldaanku wuxuu ka mid ahaa odayashii isku raacay inaanan Col. Cabdullahi maalin qura xukunka loogu darin, ayagoo markaasi ka duulayey dastuurka u degsan dowlad gobaleedka Puntland.
Col. Cabdullahi Yusuf oo astaantaamaha diktatooriyada aanan marnaba ka marneyn ogaadey in Suldaan Hurre halis ku yahay kursigiisa. Kolkaas ayuu Col. Cabdullahi bilaabo dagaal mutaxan oo ku mucaaridayo boqrnimada Suldaanka, wuxuuna isku dayey inuu ka dhinac sameeyo caaqil kale, laakiin kuma guuleysanin oo wuxuu Suldaanku noqday dayax shan iyo tobnaad aan sacabo qarin Karin.
Inkastoo dilka Sulaan Axmed Hure ay dileen ilaada Col. Cabdullahi Yusuf, hadane waxaan meesha ka marneyn in Col. Cabdulahi Yusuf ka danbeeyey dilkaas naxariisdarrada leh. Baaritaan madax banana oo ay sameeyeen ehelada Suldaanka ayaa runtii ku soo arooray in Col. Cabdullahi Yusuf uu marka ay ilaaladiisu suldaanku la beegsanayeen rasaasta uu ku sugnaa meel aan ka fogeyn, wuxuuna hogaaminayey hawlgalkii lagu dilay Suldaan Hurre.
Dilkaas waxashnimada ah ayaan ah mid Col. Cabdullahi weli ku sii indha cad yahay, waxaana daliil u ah dabka uu dhawaantan ka hurinayo magaala madaxda Soomaaliya Muqdisho, Gobolka Bay, Mudug iyo Jiida u dhaxeysa Soomaliland iyo gobolka Puntland.
Col. Cabdulahi Yusuf baan ahayn nin aan marnaba ka arrimin nabad iyo xasilooni toona, waxaana looga fadhiyin heshiis iyo maslaxo uu dhex-dhigo dadka Soomaaliyeed ee dagaalka sokeeye aafeeyey.
Hadabo waxaan ku boorrinaynaa Somalida, bulshada caalamka iyo hay’adaha xaquuqul insaanka inay u fiirsandaan ficillada kaliyetalisnimada ah iyo tacaddiga uu Col. Cabdullahi u tafaxaydanyo si uu u fashiliyo nabadeynta laga wado dalka Soomaaliya.
Waxay bahda shabakada Buluugleey Ilaah uga baryeynaa in marxuumku janada ka waraabiyo, ehelediisuna samir iyo iimaan ka siiyo.